Taariikh nololeedkii Karin Söder - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Taariikh nololeedkii Karin Söder
La daabacay måndag 28 december 2015 kl 12.48
Wixii ka dambeeyay sannadkii 1957 oo xisbiga Centerpartiet uu qaatay magaca uu iminkaba sito ayey soo mareen lix hoggaamiye oo laba ka mid ahi haween ahaayeen, halka afarta kalena ey rag ahaayeen.
Karin Söder, oo muddo sanooyin ah haysay hoggaanka xisbiga sannadihii siddeetameeyadii ayaa ahayd haweenaydii ugu horreeysay oo hoggaamiye ka noqota xisbiyada dalka midkood.
Karin Söder ayaa ku dhalatay carriga Värmland sannadkii 1928. Karin Söder ayay waaldkeed ahaayeen macallimiin ka howl-geli jirey dugsiyada Värmland, waxeyna meel ku soo wada koreen waalidkeed iyo laba walaallo ah oo iyadu ay saddex ku ahayd. Sannadkii 1950 ayay qaadatay shahaado iskuul, dabadeed ey muddo 20 sannadood ah ku shaqeeysay macallin-nimo illaa iyo sannadkii 1971 oo ay xubin ka noqotay xubnaha baarlamanka ee dalka Sweden illaa iyo sannadkii 1991. Laga bilaabo illaa horraantii sannadihii 1960 meeydaii waxay xubin firfircoon ka ahayd siyaasiyiinta golaha deegaanka xisbiga Centerka ee degmada Täby. Karin Söder ayaa haysay xilka wasiirka arrimmaha dibadda Swedenintii u dhexeeysay sannadihii 1976-1978, iyadoona noqotay haweenaydii ugu horreeysay ee qabata jagada wasiirka arrimmaha dibadda Sweden. Sannadihii u dhexeeyey 1979-1982 ayay haysay jagada wasiirka wasaaradda bulshada.
Karin Söder ayaa sannadkii 1986 loo doortay hoggaamiyaha xisbiga Centerpartiet, tallaabadaasina oo ka dhigtay haweenaydii ugu horreeysay Sweden ee noqota hoggaamiye xisbi. Iyadoona sannadkii 1987 laga xayuubiyay xilkaasi, kolkii ay soo baxday inay maskaxda buro (qanjir) ku leedahay. Hase yeeshee kolkii uu caafimaadkeedii hagaagay ay hoggaamiye ka noqotay ururka badbaadinta dhallaanka sannadihii 1983-1995, dabadeedna Selma Lagerlöfsällskapet sannadihii 1998-2006.
Siyaasad ahaan waxay ku soo caan baxday inay xirtay dukaammada khamriga lagu iibiyo maalmaha sabtida. Hase yeeshee kolkii iyada wax laga weeydiiyey ay sheegtay in lagu xasuusan doono saqafka dhaqaalaha lagu bixiyo daryeelka caafimaad iyo dawooyinka iyo dhaqaalaha la siiyo dhallaanka waxa loo yaqaanno flerbarnstillägg. Howlahaasina oo ay sheegtay inay ku faraxsanayd inay ku guuleeysatay. Muddadii ay ahayd wasiirka bulshada ayay ballaarisay wax-barashada tacliinta ee habka xannaanada dhallaanka - förskolan.
Isha/ TT, Dagens Nyheter